/Blog/I-Boldenone/I-Boldenone Undecylenate: I-8 I-Effo Side Effects You Ufuna Ukugwema
Posted on 04 / 08 / 2019 by UDkt Patrick Young wabhala ku I-Boldenone.
Konke mayelana ne-Garcinia Boldenone Undecylenate
I-1. Yini i-Equipoise (i-Boldenone Undecylenate)
I-2. Izici ze-Equipoise (Boldenone Undecylenate)
I-3. I-Equipoise (imiphumela ye-Boldenone Undecylenate)
I-4. I-Equipoise (i-Boldenone Undecylenate) I-Cycle kanye ne-Dosage
I-5. Imiphumela ye-8 Equipoise (Boldenone Undecylenate) ozoyigwema
I-6. I-Equipoise (i-Boldenone Undecylenate) iresiphi yekhanda lasekhaya
I-7. I-Boldenone Acetate & Boldenone Cypionate
I-8. Ungathola kuphi iBoldenone?
Yini i-Equipoise (i-Boldenone Undecylenate)
Equipoise(I-Boldenone Undecylenate) is testosterone etholakala i-anabolic-androgen steroid (I-AAS) okuye kwaba emakethe kusukela 1940s. Kukhona isibalo se-Boldenone esters kuhlanganise ne-Boldenone Cypionate, i-Boldenone Acetate.
Ngenkathi isingeniso, i-equipoise isetshenziswe kuphela yizilwane zezilwane kuze kube yilapho ku-1950s lapho uCiba efaka ibanga lomuntu. Abacwaningi bahlakulela amahhashi ukuze bathuthukise isifiso sabo kanye nesisindo somzimba osondayo.
Abakhi bomzimba abasebenzisa bajabule ngethonya elikhulu lokukhwabanisa lelo steroid eligcwele. Ukwengeza kulokho, akuzange kubangele ukugcinwa kwamanzi ngakho-ke akubanga ndawo yokubukeka okubuhlungu okubuhlungu.
Itholakale ensimini yezokwelapha kuze kube yi-1970s emva kwalokho ehoxisiwe. Ukuba yi-gem engavamile, itholakala kuphela ngezilwane zezilwane nezimakethe ezimbalwa. Linamanye amagama okuhweba afaka iBold-one, Boldoject, Boldane, Boldebolin, Equigan, ne-Equidex phakathi kwabanye.
Izici ze-Equipoise (Boldenone Undecylenate)
Equipoise Vs i-deca
Iningi labakhi bomzimba bebelokhu bezama ukuqhathanisa I-Deca kanye ne-Equipoise. Zombili i-steroids yizona ezigcina ekugcineni ubuhlungu besisindo kanye nokuzuza komzimba. Bobabili baphumelela lokhu ngokukhuphula amaprotheni synthesis. Omunye umehluko wukuthi abasebenzisi be-Deca kufanele balandele ukwelashwa okuqinile okuthunyelwe ngemuva ngenxa ye-estrogen ebangelwa yiyo.
Ezinye zezidakamizwa ezisebenzela umzimba ze-PCT yi-Nolvadex, I-Clomid, no-Arimidex. Lokho kungesinye sezizathu zokuthi abaningi abanokukhubazeka gurus bacabange ukusebenzisa i-Equipoise. Enye inkinga nge-Deca ukuthi ihlala ohlelweni lomuntu isikhathi esiningi. Njengoba ingase ihlole okuhle emzimbeni wakho cishe iminyaka emibili, abagijimi abahlolwa bavame ukusebenzisa i-Equipoise. Isikhathi sokuthola isikhathi sezinyanga ezinhlanu.
Uma kuziwa emiphumeleni emibi ye-boldenone ne-deca side effects, i-equipoise ithwala usuku. I-Equipoise yaziwa ngokubangela nemiphumela emibi ye-androgenic njenge-acne, izinwele zobuso, nokulahleka kwezinwele kuyilapho i-Deca ivame ukuxhunyaniswa nokugcinwa kwamanzi kagesi kanye ne-gynecomastia.
I-Deca iyinhlangano enhle kakhulu kulabo ababheke kuningi ngenkathi i-equipoise ivame ukusetshenziswa ekujikelezeni imijikelezo. Akumangalisi ukuthi abantu abaningi bakhetha ukusebenzisa i-boldenone yokusika ngenxa yokuthi inikeza imiphumela ephelele.
Ukubamba konke, Equipoise uthola uthando olukhulu kuwo wonke umuntu ngenxa yokuzuza kancane kodwa okuzinzile okuhlinzeka ngokulandela amandla nesisindo ngaphandle kokukubeka enkingeni yokubhekana nemiphumela emibi ye-estrogenic. Kungaba yingxenye yomjikelezo omude. Ukwengeza, i-Equipoise ibamba izandla ze-Deca phansi uma kuziwa ekukhuthazeni ukukhiqizwa kwamaseli obomvu nokuvuselelwa kwesifiso.
I-Boldenone Undecylenate yabelana ngokufana okufana ne-testosterone uma kuziwa ekuthuthukiseni okuningi. Bobabili i-steroids banamaphuzu amakhulu futhi banakho ikhono loku:
Ukugcinwa kwe-nitrojeni kuholela ekukhuleni kwemisipha noma kunalokho ukugcinwa kwayo.
Nciphisa inani lamahomoni e-glucocorticoid
Ukuvimbela i-glucocorticoids kuqinisa ukuwohloka kwamaprotheni zibe izingxenye ezincane ezifana nama-amino acids. Lokhu kusho ukuthi kokubili testosterone kanye equipoise kunganciphisa isigaba catabolism of umzimba.
Ngokunciphisa ama-hormone we-glucocorticoid, isikhathi esithatha imisipha yakho ukuze ululame ngemva kokuqeqeshwa komzimba kunciphisa kakhulu.
I-Insulin-Like Like Growth Factor 1 (IGF-1) isiza ukuzala nokuvuselela amangqamuzana kuwo wonke umzimba. Ngenxa yalokho, kukhona ukudalwa kwemisipha emikhulu nokuvimbela ukuchitheka kwemisipha. Equipoise futhi Testosterone ukwandisa ukukhiqizwa kwe-IGF-1 okwakhuthaza ukuvuselelwa komzimba.
Thuthukisa isakhi samaphrotheni
Akungabazeki ukuthi amaprotheni enye yezinto ezibaluleke kakhulu emzimbeni womuntu. Yilokho okwenza umzimba ukhule noma ushintshe. Uma kunamaprotheni amaningi emzimbeni, kukhona ukuthuthukiswa kwamascle amaningi nokulungisa izicubu. Ngenxa yalokho, umuntu angaqeqesha kanzima futhi isikhathi eside.
Ukulungisa izicubu kangcono kusho ukuthi uma uphakamisa isisindo esinzima kunelawo ojwayele ukuwenza; uzothola ngokushesha ngoba inqubo yokulungisa izoba ngcono.
I-Equipoise (imiphumela ye-Boldenone Undecylenate)
Imiphumela yesibindi se-boldenone esingasebenzis ekwakheni umzimba
Naphezu kokufaka yonke imizamo yakho yokuzivocavoca, akunjalo okwamanje? Kungase kuphazamise ukuthi ngemva kokusebenza kanzima ekuzivocavoca, awukazanga ukufaka amakhilogremu emisipha yakho. Uma uhlale ufuna into engakusiza ekukhukhuleni ngokushesha, ngokuphepha nangempumelelo, ngizokutshela imfihlo.
Uyazibuza ukuthi i-undecylenate ye-boldenone isetshenziselwa yini? Khona-ke awukaze ubone umphumela wokubamba ukuthi isibindi senza imiphumela engafani kahle. Yize kuthatha isikhathi esithile, le steroid ivumela umuntu ukuba athole umthambo wemisipha emangalisa. Ukuqhathanisa iBoldenone vs Deca Durabolin noma Anadrol, imiphumela ye-boldenone ngeke ibe esheshayo.
Inzuzo nayo yukuthi ukuzuza kuhlala isikhathi eside futhi hhayi njengomphumela wokugcinwa kwamanzi. Ngakho uma ufuna ukubukeka kahle futhi ube yikulumo yedolobha, i-Boldenone Undecylenate iyindlela yokuhamba.
Cishe uyazi ukuthi awukwazi ukwandisa isisindo sakho semisipha uma ungadli okwanele. Njengezindlu zidinga izinto eziwusizo ezanele, imisipha idinga ama-carbohydrates, ama-amino acids, namaprotheni amaningi kakhulu ukuba akhule ngobukhulu. Ngeshwa, abakhi bomzimba abaningi abazi ukuthi bangakwenza kanjani lokhu.
Ngezinye izikhathi, umakhi womzimba anganconywa ukuthi adle okungenani ama-kilojoule angaphezu kwenkulungwane njalo ngosuku olulodwa ukupakisha ngemizimba eminingi. Ngezinye izikhathi kungase kube ngaphezulu.
Lokhu kungukudla okuningi kuwo wonke umuntu, futhi abantu abaningi bangase bakuthole kunzima ngisho nokudla ingxenye yawo. Ungase ube nomgomo wokudla ama-khalori amaningi ukuze uthole ukuthi ugxile ngaphambi kokuba uqaphele noshintsho usayizi wakho we-muscle. Izindaba ezinhle ukuthi enye ye-boldenone esebenzayo ekwakheni umzimba ukuthi iphumelele ukubhekana nesifiso esincane kakhulu ngakho kukusiza ukuba ufeze imigomo yakho yomzimba.
Ngesilinganiso esifanele se-boldenone undecylenate, cishe uzobona ushintsho olubalulekile kuwe Iphango. Ngenxa yalokho, ungadla amakholori amaningi namaprotheni njengoba ufuna. Ukusebenzisa ama-carbs amaningi kuzokwandisa inani le-glycogen kumaseli akho omzimba okwenza kanjalo uninike amandla amaningi ngenkathi ku-gym. Ngenxa yalokho, uzokwazi ukuphakamisa isisindo esikhulu kunokuba usuphakamisa esikhathini esidlule. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi izici zomzimba kanye nabagijimi abanobunzima bokudla bahlale bekhetha ukungena kwe-boldenone.
Amandla yilokho okufaka isandla kwisayizi. Zama futhi ungazinaki izizuzi zamandla futhi uzobona ukuthi imisipha yakho ayifinyelele emzimbeni oyifunayo.
Ukwanda kwamandla kungenye ye-boldenone esebenzisa ekwakheni umzimba. Lenza ngcono amandla omuntu okuzuzisa kakhulu ikakhulukazi ohlelweni lwe-offseason mass. Ubuhle naso ukuthi bukhuthaza nokusebenza kwezemidlalo futhi.
Ngokunyuka kwamandla, uzokwazi ukubhekana nokuzivocavoca okwengeziwe ngaphandle kokuthi uzizwe sengathi ujezisa wena. Usuvele usho ukuthi lokhu kuzoholela kuphi. Ukuqeqeshwa okwengeziwe kusho ukuthi manje uthole imisipha emikhulu.
Ukusika kungomunye weBoldenone oyintandokazi oyisebenzisayo ekwakheni umzimba. Kuyinto evamile phakathi kwabalimi bomzimba nabancintisana abafuna ukuqeda amafutha amaningi futhi babheke ngokushesha ngangokunokwenzeka.
I-Boldenone Undecylenate yi-steroid yokusika engumvikeli omuhle kakhulu we-mass muscle mass. Uma usukwazi ukugijima ngokuzikhandla emjikelezweni wokusika, uzomangala ukuthi uzolahlekelwa kanjani wonke amafutha angadingeki ngenkathi imisipha yakho isacacile. I-Boldenone yakho ngaphambi nangemva kwezithombe kuyoba ubufakazi bokuthi ungumuntu ohluke ngokuphelele.
Ukulahlekelwa ngamafutha omzimba, kumele ube nephutha lekhalori. Kusho ukuthi kufanele ushise amakholori amaningi kunalawo owadlayo. Ngeshwa, ukwehluleka kwekhalori kungakwenza ulahlekelwe izicubu zakho zomzimba njengoba umzimba uzama ukwanelisa amandla okusebenza. Ukudla okunempilo kungakuvikela kulokhu, kodwa kungenzeka ukuthi ungaqinisekiswa.
Ukuze ugweme ukulahlekelwa imisipha, uye wazikhandla kakhulu ukuthola; ungakhetha ukuthatha i-equipoise. Ngeke nje uvikele imisipha yakho ephilile kusukela ekulahlekelweni kodwa futhi inezimo ezinhle zokubeka isimo esimweni sakho somzimba.
Abaningi bomzimba bawasebenzisela ngaphambili komjikelezo wokusika futhi bayeke phakathi nengxenye yokugcina ngoba kungabangela imiphumela emibi ye-estrogenic.
I-Equipoise (i-Boldenone Undecylenate) I-Cycle kanye ne-Dosage
I-Equipoise (i-Boldenone Undecylenate) Umjikelezo
I-Equipoise ithokoza kakhulu ekusebenzisaneni okuhlukahlukene njengoba ungayisebenzisa yedwa noma uyibeke ndawonye nabanye I-Anabolic Steroids. I-steroid oyikhethayo incike kulokho ofuna ukukufeza.
Imijikelezo ye-Equipoise ingahlukaniswa kanje:
Umjikelezo wokuqala-Uma usebenzisa i-Equipoisefor okokuqala, kutuswa ukuthi uthathe i-300-500mg ye-Testosterone Enanthate / Cypionate kanye no-400mg we-Equipoise ngesonto. Umjikelezo wokuqala kufanele ugijime amaviki angaphezu kwangu-14. Ngalesi sikhathi, noma yikuphi oqalayo angakwazi ukubona inani elizuzayo lemali emisipha.
Izinga eliphakathi- Uma ukholwa ukuthi unezinga eliphakathi lesipiliyoni futhi usaqiniseki ukuthi ungaqhuba kanjani i-Equipoise, nanka amathiphu ambalwa; Thatha i-Equipoise kanye Dianabol kumthamo we-25mg nsuku zonke cishe amasonto amane kuya kwamane. Ukuze i-Equipoise, umthamo wanda kancane ku-400-600mg ngesonto. Isilinganiso esiphezulu sesikhathi lapho lo mjikelezo kufanele ugijime ngamasonto ayishumi nambili.
Izinga eliphakeme- Labo abanolwazi oluhle baneluleka ukuthatha i-Boldenone Undecylenateat umthamo wamasonto angaphansi kwamatshumi ayishumi nambili kumyinganiso we-600mg ngesonto. I-Trenbolone Enanthate ingaba yi-steroid engcono kakhulu yokuyibeka ngomthamo we-400mg ngesonto.
Umjikelezo we-Equipoise ungabuye ubekwe eceleni ngokusho komgomo wakho. Nazi izigaba ezimbili;
Umjikelezo wokubhukuda ungabonakala kanje;
I-Dianabol -30mg ngosuku ephathwa kusukela ngesonto 1 kuya kwesonto 8
I-Equipoise- 600mg ngesonto elawulwa kusukela ngeviki 1 kuya kwesonto 12.
I-Boldenone yokusika umjikelezo:
Winstrol-35mg ngosuku olwenziwa kusukela ngesonto 1 kuya kwesonto 8
I-Equipoise- 500mg ngesonto elawulwa kusukela ngeviki 1 kuya kwesonto 12
Umjikelezo ovamile weBoldenone no-Testosterone ungabonakala kanje;
Ikomidi Isikali Ubude besikhathi
Equipoise 400mg / ngesonto 15 amasonto
I-testosterone i-Enanthate 500mg / ngesonto 15weeks
Nakhu okunye okukwazi ukuqhuba ukuqeqeshwa;
Iviki I-Turinabol Equipoise I-Testosterone cypionate I-Nolvadex
1 50mg nsuku zonke 400mg masonto onke 500mg masonto onke
2 50mg nsuku zonke 400mg masonto onke 500mg masonto onke
3 50mg nsuku zonke 400mg masonto onke 500mg masonto onke
4 50mg nsuku zonke 400mg masonto onke 500mg masonto onke
5 50mg nsuku zonke 400mg masonto onke 500mg masonto onke
6 50mg nsuku zonke 400mg masonto onke 500mg masonto onke
7 400mg masonto onke 500mg masonto onke
8 400mg masonto onke 500mg masonto onke
9 400mg masonto onke 500mg masonto onke
10 400mg masonto onke 500mg masonto onke
11 400mg masonto onke 500mg masonto onke
12 400mg masonto onke 500mg masonto onke
13 500mg masonto onke 20mg nsuku zonke
14 500mg masonto onke 20mg nsuku zonke
I-Equipoise (i-Boldenone Undecylenate) Isilinganiso
Ukuze ugweme ukubhekana nemiphumela emibi, kufanele ulandele imihlahlandlela efanele. Khumbula ukuthi umthamo owulandelayo uphakeme kangakanani, ukhathazeka kakhulu ukuthi ubhekene nokuhlupheka ngenxa ye-estrogenic. Futhi, kufanele uthathe isilinganiso esifanele ukuze ungaphuthelwa izinzuzo.
Ngokujwayelekile, isilinganiselwa se-Boldenone Undecylenate sisuka ku-200-400 mg ngesonto. Kubantu, umthamo we-400mg ubekezeleleke kahle futhi yisilinganiso esincane kakhulu iningi labo elizokhetha ukuthatha. Abanye baya ku-600mg ngoba kuvunyelwe kahle futhi imiphumela emibi ye-equipoise iyaphathwa kahle.
Uma kuqhathaniswa ne-equipoise 'imisebenzi emide, amadoda amaningi azinikela / athola ukuphathwa ngejoza elilodwa ngesonto. Isilinganiso se-Boldenone Undecylenate singabuye sihlukaniswe zibe ama-injection amabili noma amathathu amancane. I-Boldenone Undecylenate isigamu-ukuphila eside ivumela isimiso somjovo esivame kakhulu ngemiphumela emibi ephathekayo.
Kwabesifazane, isilinganiso se-Boldenone Undecylenate esilinganiselwe ngu-50mg ngesonto. Ngalesi sifo, ukuvivinya umzimba kungavamile, kodwa ukuzwela kwayo kuzoxhomeka kumuntu. Abanye besifazane bangakwazi ukubekezelela umthamo we-75-100mg, kodwa ukwaziswa ukuba ungaqala ukuba nomthamo onjalo uze uqiniseke ukuthi umzimba wakho ukhululekile nge-50mg ngesonto ngalinye.
I-8 Equipoise (uhlangothi lwe-Boldenone Undecylenate) imiphumela wena'll ufuna ukugwema
Imiphumela emibi ye-Equipoise ayinzima njengalezo ezibangelwa ezinye i-steroids. Labo abaziyo ukugijima kahle, abakwazi ukukhononda nganoma yimiphi imiphumela emibi.
Nakuba kunemibiko yokuthi iBoldenone Undecylenate ingashintshwa ku-estrogen, kwenzeka njalo. Umsebenzi we-estrogen ungase ube ngaphezulu uma uqhathanisa boldenone vs deca, kodwa yingxenye ye testosterone.
Ukuze unciphise ubuhlungu bemiphumela emibi, kufanele uthathe isilinganiso esifanele. Ungaqala ngomthamo ophansi kakhulu futhi ukwandise njengoba umzimba wakho uqhubeka ulungisa. Uma wenza lokhu, ungahlola ukuzwela komzimba wakho kule steroid anabolic.
Uma ubona imiphumela emibi njengokuvuvukala kwezinyawo noma imilenze ephansi, izindawo ezinombala obomvu ngaphakathi emlonyeni noma ekhaleni noma emzimbeni, ubuhlungu besifuba, ukuhlanza kwegazi, okungavamile, ulimi olubi, isisindo sokunambitheka, inzuzo engavamile, ulimi olubi, okungavamile ukuphuma kwegazi noma ukuhlala okulindile / okumnyama / okukhanyayo kubheka usizo lwezokwelapha.
Ngesikhathi somjikelezo wakho we-Equipoise nangemva kwakho, ungase ubhekene nokucindezelwa kwe-testosterone. Ukuncipha komkhiqizo wakho wemvelo we-testosterone kungase kube nemiphumela emibi ehlukahlukene.
Esicwaningweni esenzelwe onogwaja besilisa, ukujova nge-Equipoise kubangela umonakalo obalulekile wokuzala, ikakhulukazi ukucindezelwa kwe-testosterone. Ukukhiqizwa kwabo kwe-testosterone akusiyo nje kuphela ukwehla komzimba kodwa amazinga e-estradiol awo ayenyuka futhi.
Abasebenzisi abaningi besilisa baye bahlushwa amazinga aphansi okuthiwa yi-serum leptin. Amazinga omuntu we-testosterone angadonsa ngokuphawulekayo nje ngemva kokujola kokuqala.
Umsebenzi wezocansi okhubazekile
I-Equipoise ingathinta wakho Ukuphila kwe-SEX ngokungafanele ngenxa yokucindezelwa kwe-testosterone nokubuswa kwe-estrogen okuhambisana nayo. Kungase kunciphise i-libido yakho, futhi ungase ube nezinkinga ekuziphatheni kocansi.
Ngezinye izikhathi, kungase kubangele i-gynecomastia eyaziwa ngokuthi i-boobs yamadoda, isimo esinganciphisa ukuzethemba kwakho kakhulu. Akekho ofuna ukuthi owesifazane wabo abone ukuthi bathole ama-boobs esikhundleni sezinsizi ezinzima.
Okubi nakakhulu, ama-testicles akho anganciphisa, futhi lokhu kungabangela ukubala kwe-sperm nokulahleka kokuzethemba. Ngezicathulo ezinamafutha, ungaqiniseka ukuthi ukuzala izingane kungaba nzima kakhulu.
Ngenxa yokuthi i-anabolic ne-androgenic steroid, i-Boldenone kungenzeka ikunike ukuma nobukhulu obuningi obulokhu bufuna futhi ngesikhathi esifanayo kufakazela izici zesilisa ezifana ne-acne ne-oily skin.
I-Equipoise yandisa ukukhiqizwa kwamafutha esikhumba okuvame ukuhambisana nama-breakout. Ngokuyinhloko, i-acne ivela ebusweni nangemuva. Ngeshwa, ukusebenzisa ubuso ukuwanciphisa kungase kube yize ngoba induna ibangelwa ukwanda kwama-androgenic emzimbeni.
Ukulimala kwezinso nesibindi
I-Equipoise ingabangela ukulimala komzimba, umphumela ohlangothini obonakala ngokuguqulwa ngobukhulu, ukuma nokusebenza kwezinso zomuntu. Lokho kwenzeka kubo bobabili besilisa nabesifazane futhi kunikezwe amandla yiqiniso lokuthi le steroid i-androgenic.
Esicwaningweni esenziwe ezilwaneni, onogwaja abesilisa abasebenza nge-equipoise babonise izimpawu ze-hepatic (isibindi) nomonakalo we-renal (izinso). Icala elifanayo lenzeke kubantu, futhi lokhu kungase kusekelwe isifundo esitholakala ku-Journal of Sports, Medicine-and Physical Fitness.
Abesifazane bathuthukisa izici zesilisa
Abesifazane abasebenzisa i-equipoise bangase bahlupheke kakhulu. Lokhu kusho ukuthi bangabona ukuthi baqale ukuthuthukisa izici kanye nezici okufanele zenzeke kuphela emadodeni. Ngokwesibonelo, bangase bafinyelele ubukhulu bemisipha ababufuna kodwa ngesikhathi esifanayo bakhule izinwele ezingadingeki ebusweni. Abesifazane abathandi izintshevu phezu kwabo, futhi lokhu kungaba ukuvala okunjalo.
Ukwengeza kulokho, abesifazane abasebenzisa i-equipoise bangase balahlekelwe ezinye zezimpawu zabo zesifazane, bakhulise ulaka futhi bazwa izwi elijulile futhi.
Uma kuqhathaniswa nezinye i-anabolic steroids, i-equipoise ifaka umphumela omubi kakhulu ohlelweni lwe-cardiovascular. Kodwa-ke, kunethuba lokuhlupheka okubangelwa umthelela omubi emazingeni e-cholesterol. Njengezinye i-androgenic steroids inganciphisa i-HDL yakho (i-cholesterol enhle) futhi iphakamise i-LDL (i-cholesterol embi)
Ukuvimbela lokhu, gcina ukudla okunomsoco ngokudla ukudla okunempilo bese wengeza umzimba wama-cardio ohlelweni lwakho lokuqeqesha.
Ukuqhaqhazela nge-Equipoise kungenza ube nesifo senhliziyo. Isizathu salokhu ngoba ukusetshenziswa kwayo kungaholela ezimweni ezinobungozi.
I-Equipoise ingakwazi ukuqinisa ubude bephethini yesilisa futhi yenza abantu abangakaze bahlelwe kuso ukuze bahlupheke kuyo.
I-Equipoise (i-Boldenone Undecylenate) iresiphi yekhanda lasekhaya
Iresiphi ye-Boldenone Undecylenate ye-liquid steroid kanje
I-EQ 300mg / ml Iresiphi ye-100ml
Amafutha aqoshiwe 62.5ml
I-Benzyl Benzoate 10ml (10%)
I-Alcohol i-2ml (2%)
I-Boldenone Undecylenate 30g (25.5ml)
I-Boldenone cypionate is ester esifushane uma kuqhathaniswa ne-undecylenate eyodwa. I-Boldenone Cypionate isigamu-ukuphila isikhathi eside futhi boldenone isikhathi cypionate ukuthola isikhathi kungase kufike eminyakeni eyodwa nengxenye. Ngenxa yalokhu, umthamo we-Boldenone Cypionate uhlanganisa ukujova njalo. Akumangalisi ukuthi labo abangathandi imishanguzo abasebenzisi i-Boldenone Cypionate steroid. Isilinganiso se-Boldenone Cypionate esivela phakathi kwe-100-150mg nge ml.
I-Boldenone Cypionate steroid isetshenziselwa ukuphatha amahhashi ukuwasiza ekwengezeni isisindo kanye nokuthuthukisa izingubo zabo zezinwele nesimo somzimba jikelele.
I-Boldenone Acetate eyaziwa ngokuthi i-short-acting Equipoise iyi-steroid ene-ester ehlukile ehlanganiswe kuyo. Ngokuyinhloko isetshenziselwa ukugijima kwamahhashi, kodwa umzimba we-bodybuilders uyayithanda I-Boldenone Acetate izinzuzo ikakhulukazi emzimbeni we-muscle omzimba. Isilinganiso se-Boldenone Acetate yi-400-800mg ethathwa kanye ngesonto.
I-Boldenone Acetate homebrew recipe (uhlu)
I-100ml @ 100mg / ml
2% Benzyl Utshwala U-2ml
I-100g Boldenone i-Acetate powder 80ml
I-Boldenone Cypionate i-homebrew iresiphi (uhlu)
I-Boldenone Cypionate iresiphi iqukethe;
I-Boldenone Cypionate 200mg / ml
50ml i-Boldenone Cypionate 200mg / ml
I-1ml ye-Alcohol Alcohol
15ml i-Ethyle oleate
I-15ml i-oli eqoshiwe
Ungathola kuphi iBoldenone?
Njengomakhi womzimba noma wezemidlalo, ubukele njalo isikhathi sokuthile okuzokubeka ngaphezulu kwegeyimu yakho. Emazweni amaningi, Nokho, ukusetshenziswa I-Anabolic Steroids kuvunyelwe, futhi kungase kube nzima kuwe ukuba ufinyelele kubo. Noma kunjalo, ungawafinyelela kalula ngokusebenzisa iwebhusayithi ngokufanelekile. Futhi ukuthenga inthanethi kuza nezinzuzo eziningi kubandakanya inqubo yokuthenga engenamakha.
E-intanethi, ungafunda kabanzi kwi-steroid ofuna ukuyithenga. Isibonelo, lapha ungakwazi ukufunda nge-recipe ye-Boldenone Acetate, isibhamu se-Boldenone Cypionate, yini iBoldenone esetshenziselwa nanoma yini enye ongathanda ukwazi ngayo. Ngesikhathi unquma ukuwuthenga, usuvele uhlomile kahle yonke imininingwane ekusetshenzisweni kwayo. Futhi ukwenza kube ngisho nokucindezeleka mahhala kuwe, lonke lolu lwazi luyatholakala ekududeni kwekhaya lakho noma ihhovisi.
Izitolo ze-inthanethi zithengisa ngamanani angcono uma kuqhathaniswa nezitolo zangokwenyama. Intengo ye-Boldenone izoba engabizi kakhulu ku-intanethi ngoba cishe uzothola amadili angcono. Ukwengeza, ungathola izaphulelo zokuthenga okuningi. Ubani ongathandi ukugcina imali engaphezulu?
Uyazi ukuthi ungathenga iBoldenone ngokungaziwa ngaphandle kokuba wonke umuntu azi ngakho? E-intanethi, uthola ukugwema imibuzo eminingi ongase uyizwe ifana nehlazo. Nguwe kuphela kanye nenkampani owaziyo ukuthi yini ephaketheni lakho futhi noma ubani omunye uzobona ukuxhaphazwa kwemisipha.
The I-Boldenone edayiswayo iwuphawu oluyingqayizivele futhi ngeke lukudumaze. Akungcoliswa futhi ngeke kubeka impilo yakho engozini. Yenza iwebhusayithi evumelekile eyenza imikhiqizo yayo kanye nemishini yobuciko. Ungaqiniseka ukuthi i-Boldenone yethu yokuthengisa izokunikeza imiphumela yakho oyifunayo.
Ungase futhi ufune ukuthenga izikhwama zamahhashi. Thenga it namuhla, futhi i-hose yakho ngeke ijabule kakhulu.
I-Masteron Inanthate I-Longer Esebenzisa i-Androgenic Anabolic Steroid (AAS) Indlela Yokukhetha I-Steroids Powder Suppliers ku-12 Izinyathelo